Ithegi: imephu yobushushu | Martech Zone
Yonke i-imeyile ethunyelwa ngaphandle kwibhokisi yakho engenayo lithuba lokuthengisa. Ngelixa sithumela incwadana yethu ukuya kwitoni yababhalisi, sikwathumela ezinye ii-imeyile ezingama-20,000 kunxibelelwano lwemihla ngemihla phakathi naphakathi kwabasebenzi, abathengi, amathemba, kunye neengcali zonxibelelwano noluntu. Ukucela wonke umntu ukuba ongeze ibhena yokunyusa iphepha elimhlophe okanye i-webinar ezayo ihlala ihambela phambili ngaphandle kwempumelelo encinci. Uninzi lwabantu lusityeshela isicelo, abanye bayasiphazamisa ikhonkco,
Sityikitye i-Hotjar kwaye senza uvavanyo lwe-heatmap kwiphepha lethu lasekhaya. Iphepha lasekhaya elifanelekileyo elinamacandelo amaninzi, izinto kunye nolwazi. Injongo yethu ayikokubhidanisa abantu-kukubonelela ngephepha elilungelelanisiweyo apho iindwendwe zinokufumana nantoni na eziyifunayo. Kodwa abayifumani! Sazi njani? Ngaphezulu kwama-20% kuko konke ukubandakanyeka kumaphepha ethu asekhaya avela kwibar yokukhangela yethu. Kwaye ekuqwalaseleni
IHotjar ibonelela ngeseti epheleleyo yezixhobo zokulinganisa, ukurekhoda, ukubeka esweni kunye nokuqokelela ingxelo ngewebhusayithi yakho kwiphakheji enye efikelelekayo. Yahluke mpela kwezinye izisombululo, iHotjar ibonelela ngezicwangciso ngezicwangciso ezilula ezifikelelekayo apho imibutho inokuthi ivelise ulwazi kwinani elingenamda lewebhusayithi- kwaye izenze zifumaneke kwinani elingenamda labasebenzisi. Uvavanyo lweHotjar Analytics lubandakanya ii-Heatmaps-ezibonelela ngokubonakalayo konqakrazo lwabasebenzisi bakho, iitephu kunye nokuziphatha okuskrola. Ukurekhodwa kwabatyeleli
I-Ptengine: Iimephu zobushushu, iphulo, ukuKhangela ukuKhangela kunye nohlalutyo
NgeCawa, uDisemba 27, 2015 NgoMgqibelo, Julayi 8, 2017 Douglas Karr
Ngelixa amaqonga amaninzi ohlalutyo kwimarike eyintsalela yetekhnoloji engaphaya kweminyaka engamashumi amabini ubudala, ubuchwepheshe obutsha bujolise kakhulu kukuziphatha komsebenzisi kunye nokuguqula uhlalutyo lwefaneli. Ubushushu ziindlela ezifanelekileyo zokubona ukuba abasebenzisi basebenzisana njani ngokuhamba kwexesha kunye nokuma kwendawo yakho, ukukhangela kunye nokubiza isenzo. I-Ptengine ibonelela ngengqokelela yezixhobo ezakhelwe ngqo ezi njongo. Uhlalutyo lweMephu yoBushushu-Thelekisa iimephu zobushushu phakathi kwamaphepha ahlukeneyo, amaxesha, kunye namacandelo angenamda wokujonga iindwendwe ezahlukeneyo
Abatyeleli bacofa phi kwiBhlog?
NgoMvulo, Februwari 2, 2015 NgoMgqibelo, Julayi 8, 2017 Douglas Karr
Kudala sisebenza kuhlobo olutsha lweMartech ixesha elide. Sisenayo imiqobo ekufuneka siyoyisile njengoko siguqula ubeko lwangoku lube yindlela yokusebenzisana ekulula ukuyisebenzisa kubathengisi ukuze bafumane kwaye baphande ukuthengwa kwetekhnoloji elandelayo. Olunye lolona vavanyo lukhulu silwenzileyo silungiselela yayikukususa ifom yokukhangela eyakhelweyo (savavanya ukukhangela kweWordPress kunye nokhangelo olwenziwe nguGoogle) sayifaka endaweni yalo